ရုပ်ရှင်ထဲက သင်ခန်းစာများ – Live the Dream
တကယ်တော့ 1997,98 ခုနှစ်ဖွားတွေကစပြီး နောက်လူငယ်တွေဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ပတ်သတ်ရင် တော်တော်ကိုကံဆိုးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ရုပ်ရှင်အနုပညာဟာ လူငယ်တွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်မှုအများဆုံး ၊ လမ်းပြဦးဆောင်မှုထိရောက်စွာ အပေးနိုင်ဆုံး အနုပညာဖန်တီးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်တွေအတွက်တော့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကဟာ အားကျစရာဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။
အရင်ရှေးခေတ်က မြန်မာဇာတ်ကားကြီးတွေကျတော့လည်း မမှီတော့ ၊ နောက်ရိုက်သမျှကားတွေကလည်း ပေါပေါတောတောနဲ့ ပေါ်လစီးကားတွေလောက်သာ ရှိတဲ့အပြင် ၊ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်တွေဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေအတွက် အရမ်းအလှမ်းဝေခဲ့ပါတယ်။ နယ်ဘက်တွေမှာဆိုရင် သီဟတင်စိုးရဲ့ သမိုင်းအကြောင်းအရာဘာမှမပါဝင်တဲ့အပြင် မမှန်ကန်တဲ့ တော်လှန်ရေးကားတွေရယ် ၊ ကျော်ဇောဟိန်း နေထက်လင်းစတဲ့ တော ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဟာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်မက်တွေ ၊ စိတ်ကူးတွေကို ဘယ်မြန်မာရုပ်ရှင်ကမှ မလှုံဆော်ပေးနို်င်ခဲ့ပါဘူး။
သူများနိုင်ငံက အာကာသတွေအကြောင်း ၊ တိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်း ၊ အလုပ်အကိုင်အမျိုးမျိုးကြောင်း ၊ ပညာရပ်အမျိုးမျိုးကြောင်း ၊ ကြီးမားခိုင်မာတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေအကြောင်း ၊ အနာဂါတ်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေအကြောင်း ၊ super heros တွေအကြောင်း စသည်ဖြင့် အကြောင်းအရာစုံလင်စွာ ရိုက်ကူးပြီး အဲ့သည်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရတဲ့ လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်း အိပ်မက်အမျိုး မျိုး စိတ်ကူးစိတ်သန်းအမျိုးမျိုး နဲ့ ‘ငါကြီးရင် အာကာသ ပညာရှင်လုပ်မယ် အာကာသယာဉ်မှူးလုပ်မယ်..ငါကြီးရင် computer software တွေရေးမယ် ..ငါကြီးရင် နည်းပညာကုမ္ပကြီးတွေထောင်မယ်..ငါကြီးရင် social influencer လုပ်မယ်..စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ရည်မှန်းချက်များ ၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းအသစ်အဆန်းများအပြင် ငယ်စဉ်ကတည်းက အလုပ်အကိုင်မျိုးစုံအကြောင်းကို ရုပ်ရှင်တွေကနေ သိရှိလေ့လာနေရတဲ့အချိန်မှာ..ကျွန်တော်တို့က “သားသားကြီးရင် ..ဆရာဝန်ကြီးလုပ်မှာ ? ပေါ်လစီကားတွေကြောင့် စစ်ဗိုလ်ကြီးလုပ်မှာ” ဆိုတာကိုပဲ ရွေးချယ်စရာမရှိပြောခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသိအမြင်တွေကို ဖွင့်ပေးနိုင်မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဆယ်တန်းမပြီးခင်ကတည်းက သိခဲ့ရမယ့်အကြောင်းတွေကို ဆယ်တန်းပြီးလို့ တက္ကသိုလ်ရောက်မှပဲ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ခွင့်ရလို့ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်တွေကနေတစ်ဆင့် ကိုယ်လုပ်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါ့လားဆိုတာကို နောက်ကျစွာသိခဲ့ကြရတာများပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ကောင်းကျိုးရော ဆိုးကျိုးရောရှိတာမလို့ လူငယ်တွေအနေနှင့် ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေကိုပဲ ကြည့်မိဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတွေဟာ လူတွေရဲ့အတွေးအမြင်မှားတွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်သလို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေကိုလည်း ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတောင် ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကောင်းတဲ့တချို့ဇာတ်လမ်းတွေဟာလည်း လူငယ်တွေလမ်းမှားရောက်စေတာ ၊ အတွေးအမြင်အမှားတွေရိုက်သွင်းပေးတတ်တာမျိုးလည်း ရှိတာမလို့ ရုပ်ရှပ်ဇာတ်ကားတွေကို မှန်ကန်စွားရွေးချယ်ကြည့်တတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ဒီတစ်ပါတ်မှာတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော့ရဲ့အမြင်ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားရုပ်သံစီးရီးတစ်ခု ၊ ဘောလိဝုဒ်တစ်ကားနဲ့ ဟောလိဝုဒ်တစ်ကားကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ တော်တော်များများလည်း မကြည့်ဖူးရင်တောင် နာမည်ကြားဖူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားအကျဉ်းချုပ်နှင့်် ဘာတွေသိရှိပြီး ကျွန်တော့ဘဝကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို အောက်မှာပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ (Spoiler Free)
၁။ Love Story In Harvard ( တစ်ခါတုန်းက တက္ကသိုလ်….)
ကိုရီးယားကားမကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော့ကို သုံးခါလောက်ထိ စီးရီးအစအဆုံး ပြန်ပြီးကြည့်မိအောင်ကို ကောင်းလွန်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပါ။ နာမည်ကြီး မင်သား Kim Rae-Won နှင့် ကိုရီးယားရဲ့အချောဆုံးမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Kim Tae-Hee တို့က ကျောင်းသား ကျောင်းသူလေးတွေအနေနဲ့သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ နာမည်မှာကတည်းက Harvard University ပါနေပြီး တကယ်လည်း ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုလုံးရဲ့ ၈၀% လောက်က တကယ့်နာမည်ကြီး Harvard University မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။
ကျောင်းသားလူငယ်တွေ မဖြစ်မနေကြည့်သင့်တဲ့ကားပါ။ Harvard ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်တောင် ကြိုးစားရသလည်းဆိုတာ အံ့သြမင်သက်သွားစေမှာပါ။ အဲ့ကားကြည့်ပြီးကတည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို စာကြိုးစားတယ်လို့တောင်မထင်တော့ဘူး ( ကိုယ်စာကျက်ရလို့ ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာ သူ့တစ်ဝက်တောင်မမှီဘူး ) နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ဘယ်လိုအပြင်းအထန်ကြိုးစားတယ် ၊ ဘယ်လိုမျိုးစာသင်ယူရတယ် ၊ ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ရတယ်ဆိုတာ အဲ့ဒီကားလေးကနေ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချက်လေးတွေပဲပါနေမယ်ဆိုရင်လည်း သုံးခါကြည့်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။ အဲ့ဒါတွေထက်ပိုတဲ့ ဖြူစင်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်က ဇာတ်လမ်းရဲ့နောက်ခံပါ။ အဲ့ကားကြည့်ပြီးကတည်းက တစ်နေ့မှာ Harvard တက်ရမယ်ဆိုပြီး စိတ်ကူယဉ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးက ကျက်စနစ်ဖြစ်နေပေမယ့် အဲ့ဇာတ်ကားကြောင့်ပဲ အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ နိုင်ငံတကာ scholarship တွေလျှောက်တဲကအခါမှာလည်း ကျက်စနစ်က ရထားတဲ့ Grade ကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ Grade ပါပဲ။ အဲ့ Grade ကလည်း စကားနည်းနည်းပြောတတ်တာမလို့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားခဲ့တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ စာတွေလုပ်ရလို့ စိတ်ညစ်တိုင်းလည်း အဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုပဲ သတိရမိတယ် ။ Harvard မှာဆို ဒီ့ဆယ်ဆလုပ်ရမှာ ..ငါက ဘာလို့ပျင်းနေတာလည်းဆိုပြီး အားတက်ခဲ့ရတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ရှေ့နေလောကအကြောင်း ၊ လူတွေရဲ့အကြောင်းလည်း အများကြီးသင်ခန်းစာရခဲ့တယ်။ တခြားကိုရီးယားတွေ
လို Over Drama မဟုတ်တာကလည်း ကျွန်တော့ကို သုံးခါကြည့်ဖြစ်စေတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် လူငယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တက္ကသိုလ်မတက်ခင်မှာ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ထားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကတော့ လူကြီး ၊ လူငယ်မရွေး ကြည့်ခဲ့ကျမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုခေတ် မကြည့်ရသေးတဲ့ လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်း အချိန်ရရင် ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ မြန်မာအခွေဆိုင်တွေမှာ ရှာလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။
၂။ Three Idiots
ဒီဇာတ်ကားကို တော်တော်များများ သိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်ကတော့ ထပ်ပြီးညွှန်းပါရစေ။ ဆယ်တန်းပြီးထားတဲ့ ကလေးတွေအတွက် မဖြစ်မနေကို ကြည့်ရမယ်။ သူတို့တွေ တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်တဲ့အခါ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကနေ သူတို့ ဘာရွေးရမလည်းဆိုတာ လမ်းပြပေးနိုင်လိမ့်မယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့လည်း ဒီဇာတ်ကားလေးကြည့်ပြီးရင် ဘာလုပ် ၊ ညာလုပ် ဆိုပြီး အတင်းကြီး တစ်ဖက်သက် ပိတ်ပြီး သူတို့စိတ်ကြိုက်ပဲ လုပ်ခိုင်းဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက မိဘတွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက်တော့ ဒီဇာတ်ကားလေးက အိတ်ဆောင်ထားရမယ့်အရာလိုဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီဇာတ်ကားလေးကျေးဇူးကြောင့် အရပ်ဘက်တက္ကသိုလ်မှာတက်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။ ဆယ်တန်းပြီးစက အမှတ်ကလည်းနည်းနည်းလေးကောင်းတော့ အိမ်က ဆေးကျောင်းတက်စေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တန်းကျ အမှတ်က ၅ မှတ်လောက်လိုနေပါတယ်။ အဲ့တော့ အိမ်ကနေပြီး အပြင်ဆေးမမှီရင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်တက်ဆိုပြီး အတင်းတွေပြောပါတယ်။ ဆရာဝန်မဖြစ်ချင်ပေမယ့် အပြင်ဆေးတက္ကသိုလ်ကိုတက်ရမယ်ဆို တက်ချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် စစ်ဆေးကိုတော့ ဘယ်လိုမှမတက်ချင်ပါ။ အိမ်ကလည်း ဘယ်လိုမှကိုပြောလို့မရဘူူး။ အဲ့ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး အကိုတစ်ယောက်က အဲ့ဇာတ်ကားလေးပြတာကနေ..အိမ်ကလူတွေလည်း ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်ဆိုပြီးတော့ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူခွင့်ပေးပါတော့တယ်။
နောက်ပြီးတော့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးက သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲက ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုလည်း ဖော်ပြပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေအတွက်တော့ တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင် ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နေရတဲ့အချိန်ကပိုများပါတယ်။ နယ်ဝေးကလာတတ်ရတဲ့သူတွေဆို အဆောင်တွေမှာ အတူူတူနေပြီး ငတ်လည်းအတူတူ ၊ စားရရင်လည်း အတူူတူ အကုန်ရင်ဖွင့်ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအထိပါဖြစ်ကျပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးကြည့်ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို တန်ဖိုးထားလာမှာ အမှန်ပါပဲ။ ပိုပြီးလည်း သတိရလာပါတယ်။
ပညာရေးတက္ကသိုလ်တက်မယ့်သူတွေ ၊ ဆရာ ၊ ဆရာမ ဖြစ်မယ့်သူတွေ ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးက ဒီဇာတ်ကားလေးကို မဖြစ်မနေ ကြည့်ရမှာပါ။ ပညာရေးဆိုင်ရာ အသိအမြင်များ ၊ သတိထားစရာများ ၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ တန်ဖိုး ၊ မိဘတွေစဉ်းစားရမယ့်အရာ ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်း အကုန်ပါတာမလို့ ဘယ်နှခါခါ ကြည့်ကြည့် သင်ခန်းစားတွေကတော့ ရပြီးရင် ရလာမှာပါ။ ကျွန်တော်ဆို ကြိုက်လွန်းလို့ ထပ်ထပ်ကြည့်တာ နောက်ဆုံး အဲ့ကားမှာပါတဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးတွေကအစ အကုန်ရတယ်။ ကြည့်ပြီးရင် ထပ်ကြည့်သင့်သလို မကြည့်ရသေးရင်လည်း အမြန်ရှာကြည့်ကြပါလို့။
၃။ Life is beautiful
1997,98 မှာ မွေးတဲ့လူတွေအတွက်တော့ ဒီဇာတ်ကားလေးက ဖွားဖက်တော်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့နှင့်အသက်တူတူပါပဲ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက အံ့သြမှင်သက်ခဲ့ရတာ ကားကောင်းတစ်ကောင်းပါ။
ဒီဇာတ်ကားကို တိုတိုရှင်းရှင်းလေး ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် တစ်ကားလုံးရယ်မောနေရပြီး တစ်ကားလုံးလည်း ငိုကြွေးနေရမှာပါ။ အငိုမျက်လုံး အပြုံမျက်နှာ…ဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားလေးကို ပြောတာပါ။
ဒီဇာတ်ကားလေးက Holocaust ဆိုတဲ့ နာဇီတွေက ဂျူးလူမျိုးတုံးအောင်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဖြစ်ရပ်မှန်အခြေခံထားတဲ့အတွက် ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးဟာ ပရိသတ်တွေကို နာကျင်စေမှာတော့အမှန်ပါ။ စစ်ပွဲအနိဋ္ဌာရုံမြင်ကွင်းတွေကြည့် ၊ နာဇီတွေရဲ့ ရက်စက်မှုကိုလည်း တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဓာတ်ငွေ့ခန်းထဲမှာ လှောင်ပိတ်ပြီး သတ်တာတွေ ၊ အရှင်လတ်လတ်မြေမြူပ်သတ်ဖြတ်တာတွေ ၊ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်တာတွေ ..တကယ့်ကို လူမဆန်မှုတွေကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ အဲ့လောက် လူမဆန်တဲ့ အနိဋ္ဌာရုံမြင်ကွင်းတွေပါတာတောင် တစ်ကားလုံးက ရယ်မောနေရမယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့်လို့ထင်ပါသလဲ…
ဇာတ်ကားနာမည်လေးအတိုင်း Life is beautiful ( ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှင်နရတဲ့ ဘဝတွေက လှပလွန်းပါတယ်…တန်ဖိုးကြီးလွန်းပါတယ်..မသေခင်မှာ ပျော်အောင်နေသင့်ပါတယ်..ဘဝကြီးကဘယ်လောက်ပဲ စုတ်ပြတ်သတ်နေပါစေ ၊ ပြဿနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောာင်နှင့် မပြီးနိုင်မစီးနိုင် ဖြေရှင်းနေရပါစေ ကျွန်တော်တို့ ဘဝတွေကို တန်အောင်နေထိုင်ရပါမယ်..အရာတိုင်းကို အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ကြည့်ပြီး ပျော်တတ်ရပါမယ် ဘယ်အရာကမှ ကျွန်တော်တို့ကို စိတ်ညစ်အောင် မလုပ်စေပါနှင့်)
ဇာတ်လမ်းရဲ့ မင်းသားဟာ ဂျူးလူမျိုးပါ..မိသားစုသုံးယောက် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနေတဲ့အချိန်မှာ နာဇီတွေရဲ့ စစ်စခန်းကို မိသားစု တစ်ကွဲတစ်ပြားဆီ အပို့ခံရပါတယ်။ သား နဲ့ အဖေက တတွဲ ၊ အမေ က တစ်ကွဲနဲ့ တကယ်ကို ရင်နာစရကောင်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်သူပါ။ အကျဉ်းစခန်းမှာ သူတို့သားဖနှစ်ယောက်ရဲ့ ဖြတ်သန်းပုံက ပရိတ်သတ်ကို တကယ်အားတက်စေပါတယ်။ သူ့လောက် အသတ်ခံရဖို့ စောင့်နေရချိန်မှာတော့ ဘဝကို အကောင်းဆုံး နေထိုင်ပြီး စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ အရာရာကို အကောင်းမြင်ပြီး ပျော်ပျော်နေနိုင်တာက ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော့အခက်အခဲတွေ ဖြေရှင်းချိန်မှာ သူ့လို သန်မာစေပါတယ်။ အရာရာကို အကောင်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပြဿနာတော်တော်များများက လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ဖြေရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတာ အံ့သြစွာတွေ့ရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ညစ်စေတဲ့အရာတွေ ပေါ်လာလည်း ဇာတ်ကားနာမည်လေးကို သတိရလိုက်တာနှင့် စိတ်ရောကိုယ်ပါ လန်းဆန်းသွားစေတယ်။
တကယ်ကို ကြည့်သင့်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးမယ့်အပြင် ဘယ်အရာကိုမှ လွယ်လွယ်ကူကူ အရှုံးမေပေးနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတက်ကိုပါ ရစေမှာပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝတွေဟာ အရမ်းလှပလို့ပါပဲ။။။ Life is Beautiful.